Inona no atao hoe RSS? Inona no famahanana? Inona ny Channel? | Martech Zone
Inona no atao hoe RSS? Inona no famahanana? Inona ny Channel?
Alarobia, Aprily 25, 2007 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Na dia afaka mahita HTML aza ny zanak'olombelona, ​​mba hahafahan'ny sehatra rindrambaiko mandany atiny, dia tsy maintsy amin'ny endrika azo vakina izany. Ny endrika izay ny fenitra an-tserasera RSS ary rehefa mamoaka ny hafatrao farany amin'ity endriny ity ianao dia antsoina hoe anao fahana. Miaraka amin'ny sehatra toy ny WordPress, dia vokarina ho azy ny sakafonao ary tsy mila manao zavatra akory ianao.
Alao an-tsaina hoe azonao esorina daholo ireo singa famolavolana ny tranokalanao ary hanome sakafo atiny amin'ny tranonkala hafa na fampiharana fotsiny ianao. Izany indrindra no namoronana ny RSS!
Midika inona ny RSS?
Ny ankamaroan'ny olona dia mino ny dikan'ny hoe RSS Syndication tsotra fotsiny saingy nosoratana am-bava Famintinana ny tranokala manankarena… Ary tamin'ny voalohany Famintinana ny tranokala RDF.
Inona ny RSS?
RSS dia antontan-taratasy miorina amin'ny tranonkala (antsoina matetika hoe a fahana or famahanana tranonkala) izay navoaka avy amina loharano iray - antsoina hoe ny fantsona. Ahitana lahatsoratra feno na voafintina sy metadata ny fahana, toy ny daty namoahana sy ny anaran'ny mpanoratra.
Ity dia horonan-tsary fohy avy amin'ny olona ao amin'ny TechNewsD Daily manazava ny fomba ahafahan'ny mpampiasa manararaotra ny True Simple Syndication (RSS):
Nahoana ianao no tokony hikarakara?
RSS feeds dia azo ampiasaina amin'ny sehatra toy ny Feedly izay isoratan'ny mpampiasa ny fantsona tian'izy ireo vakiana matetika. Mampahafantatra azy ireo ny mpamaky fahana rehefa misy atiny nohavaozina ary afaka mamaky azy ny mpampiasa nefa tsy mitsidika ilay tranonkala akory! Ary koa, ny fahana dia azo ampiasaina hanindriana ny atiny amin'ny tranokala hafa (asehonay ny lahatsoratray amin'ny DK New Media toerana ary Torohevitra momba ny bilaogy orinasa), na azo ampiasaina hamahanana ny fantsona media sosialy amin'ny alàlan'ny sehatra tahaka Feedpress, buffer, na TwitterFeed.
Oh - ary aza adino misoratra anarana amin'ny RSS Feed anay!
Tags: Famintinana ny tranokalafamintinana tranonkala manankarenaRSSrss feedinona no dikan'ny rssinona ny fantsonainona ny feedinona ny fantsona fahanainona ny famintinana ny tranokala rdfinona ny famintinana tranonkala manan-karenainona no fahana amin'ny Internetinona ny fantsona rssinona no tena syndication tsotrainona ny rss
Lisitra iray ankoatra ny fanadihadiana momba ny famolavolana tranonkala
Misy Manontany Ask.com?
Apr 25, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Any, Doug. Zavatra tena azoko !! Resy lahatra aho.
Woohoo! Naharitra tokoa ianao, Christine. Matetika aho mahazo teknika bebe kokoa amin'ireo lahatsoratro. Nieritreritra aho fa tonga ny fotoana hampiadana sy hanampy ny olona sasany hahatratra.
Rehefa gek ianao milentika amin'ity zavatra ity dia sarotra ny mahatadidy fa tsy ny olon-kafa mahalala izay lazainao!
Fanamarihana farany amin'ny RSS. Alao sary an-tsaina ny famongorana ity pejy ity ho teny sy sary fotsiny ao amin'ilay lahatsoratra… nesorina ireo entana be loatra. Toy izany ny fahitana ny lahatsoratra amin'ny fahana RSS!
Izaho dia mandrisika Google Reader!
Apr 26, 2007 amin'ny 4: 38 AM
Ny iray amin'ireo zavatra tao anaty lisitra nataoko lava dia ny fangatahana an'i Douglas hanoratra fanazavana kely momba izay tena RSS is.
Misaotra noho io fitokonana io, Doug. (ary aingam-panahy ho an'ny fizarana vaovao ao amin'ny bilaogiko koa 😉)
Oct 22, 2014 amin'ny 11: 16 AM
Ankehitriny dia manontany tena ianao hoe inona ny lohahevitra momba ny solosaina izay hampahatsiahivina anao amin'ny fotoana manaraka hitanao fa mamaky ao amin'ny Book of Genesis lol.